Android လုလင်: December 2012
Root Explorer Newest Version 2.21.1
သူငယ်ချင်းတို့ဖုန်းက root လုပ်ထားပြီးပြီဆိုရင် Root Explorer ဆော့ဝဲ တစ်ခုရှိရင် ဖုန်းတစ်လုံးကိုအမျိုးမျိုးမွှေနှောက်ပြောင်းပြစ်လို့ရတယ်ဆိုတာ
လုလင်ပျို Root Explorer ကိုသုံးပြီး လုပ်လို့ရတာတွေ တင်ပေးခဲ့ပြီးပြီနော်
အခုတော့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Version ကိုတင်မှာပါ
ဒီဟာလေးက Google play မှာ £2.50 တန်ပါတယ်
လုလင်ပျိုကတော့ free ရအောင် ပေးမယ်
ရေးတဲ့အချိန် 2:25 PM2comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Deep Sl**p Battery Saver Pro v1.01 for Android (Full Version)
Android ဖုန်း/Tablet ရဲ့ ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုကြာချိန်ကိုအကြာရှည်ဆုံးဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးမယ့်ဆော့ဝဲလေးဖြစ်တဲ့ Deep Sl**p Battery Saver Pro v1.01 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ app လေးမှာ ဖုန်းထဲမှာသွင်းထားတဲ့ app တွေရဲ့ ဘက်ထရီသုံးစွဲနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပြီး Day/Night လို့ခေါ်တဲ့ နေ့အချိန် battery သုံးစွဲနှုန်းနဲ့ ညဘက်မှာဘက်ထရီသုံးစွဲမှုကိုချိန်ညှိပေးထားလို့ရတဲ့ features လေးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ features အသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Deep Sl**p Battery Saver Pro for Android ကို Google Play မှာ ၁ ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ယူရပါတယ် ဒီမှာ free download ပေးထားပါတယ် အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ..
Deep Sleep Battery Saver Pro ကိုဒေါင်းရန်
Deep Sleep Battery saver pro ကိုဒေါင်းရန် (dropbox)
ရေးတဲ့အချိန် 2:22 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ကဲစလိုက်ရအောင်...အရင်ဆုံးအောက်မှာ download ဆွဲလိုက်ပါ
ဖိုင်ကိုဖြည်လိုက်ပါသုံးဖိုင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်မိမိတို့ထဲမှာ root expl**r ရှိမယ်ထင်ပါတယ်မတင်ပေးတော့ဘူးနော်
ကဲသုံးဖိုင်ထဲကနေ fontchanger.apkကိုအရင်သွင်းပါပီးရင်တစ်ခါအရင် run ပီးပြန်ထွက်လိုက်ပါ root expl**r ကိုဝင်ပါ ခုဖြည်ထားတဲ့သုံးဖိုင်ထိရောက်အောင်သွားပါရောက်ပီဆိုရင် zawgyiflower.ttf ဖိုင်လေးကိုကော်ပီကူပီး root expl**r ထဲက .fontchangerဆိုတဲ့ဖိုင်လေးထဲကိုကော်ပီကူးထည့်လိုက်ပါပီးရင်တော့ fontchanger application ကိုပြန်ဖွင့်ပါဖောင့်လေးတစ်ခုကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲကောင်လေးကိုနှိပ်ပီးရင် apply လုပ်ပီးတော့ reboot ချပြန်တတ်လာရင်တော့မိမိတို့ဖုန်းလေးဟာအလွန်လန်းတဲ့ဖောင့်လေးပြောင်းနေတာကိုကျေနပ်စွာတွေ့မြင်ရမှာပါ ပေးထားတဲ့ထဲကတစ်ခုလိုသေးတယ်နော် busybox.apk ကတော့လိုမှသုံးပါတချို့ဖုန်းတွေကလိုတတ်လို့ပါ
မှတ်ချက်။ ။sony ဖုန်းတွေမရပါဘူးခင်ဗျာ…
ရေးတဲ့အချိန် 2:18 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Shawebook ဆော့ဝဲ version အသစ် 2.0 ထွက်ရှိလာပါပြီ ။
Android ဖုန်းနဲ့Tablet တွေအတွက်အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ၊ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်လေးဖြစ်ပါတယ်။
မိမိသိချင်တဲ့ စကားလုံးကို မြန်မာလိုရော အင်္ဂလိပ်လိုရော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ရှိထားသင့်တဲ့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်ဆော့ဝဲလေးဖြစ်ပါတယ်။
ဖြည့်စွတ်ပြီး ပြောချင်တာကတော့ version 4.0 အထက်မှာပဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ 2.3 version တွေမှာ error ရှိပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 2:16 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Video Caller Id ဖုန်းလာရင် ဗွီဒီယိုလေးနဲ့ပြအောင်လုပ်မယ်
ကဲမိတ်ဆွေတို့ရေ ကျုပ်သူငယ်ချင်းက JAVA ဖုန်းလေးနဲ့ ဖုန်းဆက်ရင် သူ့မှာganna စတိုင်ဆိုတဲ့ဟာလေး ထည့်ထားတော့ ကျုပ်တို့ Android ဖုန်းသမားတွေက သူ့လိုလုပ်မရဘူးဖြစ်နေတယ် အဲတော့ ကိုယ့်Android
ဖုန်းလေးက အောက်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါနဲ့ Mobile app ရှာကြည့်တော့တွေ့တယ်ဗျာ။ တွေ့တွေ့ချင်းလေး လက်တို့လိုက်ပါတယ်။ အတော်လန်းတယ်နော် သူများတွေ မသုံးသေးခင် သုံးရတာပိုပြီးတော့ ခေတ်မီတယ်လို့ ခံစားရတယ်လေ။ ဒါကြောင့်ကျုပ်ဆိုက်လေးကို လာလည်သည့်မိတ်ဆွေများကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ဒီ Video Caller Id ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲလေးကို ထည့်လိုက်ပါ။ ထည့်ပြီးရင် သူ့ဆော့ဝဲလေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ အဲဒီမှာ ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ video လေးရှာထည့်ရုံဘဲ။ ဖုန်းရှိသူတိုင်း Raintone ထည့်ဘူးပါတယ်။ အခုဟာကလည်း ဖုန်းလာရင်မည်အောင် အသံဖိုင်တင်မဟုတ်ဘဲ ဗွီဒီယိုလေးနဲ့ဆိုတော့ ပိုလန်းတာပေါ့ဗျာ။ သူ့ဆော့ဝဲမှာလည်း အကောင့်လေးလျှောက်ပြီး မူရင်းဆိုက်လေးမှာ Video Raintone လေးတွေ Free download ချပြီး သုံးစွဲလို့ရပါတယ်။ ကဲပြောနေတာကြာတယ် စမ်းလိုက်ကြတော့ကွယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 2:14 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ရတာနာပုံ တယ်လီပို့ က ၀န်ဆောင်မှု ပေးနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ringtune အကြောင်း
ringtune ဆိုရင် မိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်ဆောင်သူတိုင်း သိနေလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်နော်။
မသိသေးရင် မှတ်သွားကွယ် မောင်ကြီး သင်ခဲ့မယ်
ringtone ဆိုတာက ဖုန်းလာရင် မြည်မဲ့အသံနော်
ringtune ဆိုတာက တစ်ဖက်ဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ရင် ကိုယ့်ဘက်က တူ တူ လို့ မြည်မဲ့အစား
တစ်ဖက်ဖုန်းက ထည့်ထားတဲ့ သီချင်းသံ ကို တူ တူ အစား ကြားရမှာပါ။
ဟုတ်ပါပြီ ringtone နဲ့ ringtune ကဘာကွာသလဲမေးရင်
o နဲ့ u နဲ့ ကွာပါတယ် လို့ပြောရမှာပေါ့
ဒီထက် ပိုသိချင်ရင် တော့ ringtone က ပိုက်ပိုက် မကုန်ဘူး
ringtune က ပိုက်ပိုက်ကုန်တယ်
ကိုယ်ကပိုက်ပိုက်ပေးပြီး သူများကို နားထောင်စေတာလေ ဒါပါပဲ
ဒါပေမဲ့ တချို့က ပိုက်ပိုက် ကုန်တဲ့ အလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားကြတာကလား
လုလင်ပျို ဘန်ကောက်မှာ နေတုန်းက ကိုင်တဲ့ imobile ကတော့ default ringtune ပါတယ်ဗျ အဆင်ကိုပြေလို့
ပိုက်ပိုက်နဲ့ ၀ယ်စရာ မလိုဘူးဆိုတော့ မကုန်ဘူးပေါ့
ကဲ ပိုက်ပိုက် ပေးပြီး သူများနားထောင်စေချင်တဲ့ ဘောစိတွေ ဒီနေရာကိုသွားလိုက်နော်
free များ ရမလားလို့ ရှာလိုက်တာ
အင်္ဂလိပ် သီချင်းတွေလည်း ရမယ်လေ
နောက်ပြီး ringtune မထည့်နိုင်ရင် သူ့မှာရှိတဲ့ သီချင်းတွေကို
mp3 ringtone အဖြစ် တိုက်ရိုက်ယူလို့ရသေးတယ်ဗျာ
ရေးတဲ့အချိန် 2:05 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
imgur လို့ပြောလိုက်ရင် image hosting လုပ်ဖူးသူတိုင်း သိနေလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်နော်။
အခုတော့ ကွန်ပြူတာမှာတင် မဟုတ်ဘူး လုလင်တို့ android ဖုန်းပေါ်ကနေတောင် အင်တာနက်ရှိရင် hosting လို့ရပြီနော်။
သူပေးထားတာက install နဲ့ googleplay ဆိုတော့ ကွန်ပြူတာက ဆွဲရခက်တယ်။
အဲဒါနဲ့ ဟိုနေ့က အမဖုန်းတောင်ပြီး appcenter ကနေ၀င်ဆွဲလိုက်တာ ရပြီဗျာ။
ကဲ image hosting လုပ်ချင်သူများ မူရင်းလင့် ကိုပဲ သွားလေ့လာပြီး ယူလိုက်ပါနော် ။
ရေးတဲ့အချိန် 2:02 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
‘twitter software ကို android ပေါ်မှာ အလွယ်တကူ သုံးရအောင်
twitter ကို မိမိတို့ android phone ပေါ်မှာ အလွယ်တကူ အသုံးပြုလို့ ရတဲ့ twitter software လေးပါ။ google play store ကနေရယူထား ပြီး ပြန်လည်းဝေမျှ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကဲ သုံးချင်သူများဒီမှာ DOWNLOAD LINK နှိပ်ပါ။ password တောင်းနေရင်တော့ zawthwin.com လို့ ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။
software များကို virus ပိုးစစ်ဆေးပြီမှတင်ထားခြင်းဖြစ်
ရေးတဲ့အချိန် 1:57 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Voice Unlock အသံနှင့် Lock ချရန်
Android User တွေအတွက် အသစ်ထွက်လေးကတော့ မိမိအသံနဲ့ ဖုန်းကို Lock ချထားလို့ရပါတယ်ဗျာ။
တော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်ဗျ။ဒါပေမယ့် တခုရှိတာက ကိုရဲ့အသံကိုတော့ သေသေချာချာလေးမှတ်မိရမယ်ပေါ့နော်။
ပီးတော့ တအားရှုပ်တာတွေမပေးပဲ 1 တို့2တို့ အဲလိုလွယ်မယ့်ဟာတွေကိုပဲပေးပေါ့။
Lock ပေးပီး ကိုယ့်အသံကလွဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းက Lock ပွင့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။
ကျနော့်တွေ့ ထားတဲ့ ဟာလေး ရှဲ ပေးတာပါ။
ဒေါင်းချင်တဲ့ သူများအတွက် ဒီမှာယူပါ။
Voice Locker Software
http://www.mediafire.com/file/p2 ... eunloc_c5q6aese.apk
ရေးတဲ့အချိန် 1:54 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
gif file picture ကို live wallpaper တင်ကြမယ်
gif file picture ကို live wallpaper တင်ကြမယ် လွယ်ပါတယ် giflwp folder ထဲကို gif picture လေးတွေကူးထည့်လိုက်ပြီးမှ livewallpaper ထဲမှနေပြီး လိုသလိုရွေးချယ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 1:42 AM 1 comment: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ရေးတဲ့အချိန် 1:23 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
video fille တွေကို livewallpaper လုပ်ကြမယ်
မိမိ video file လေးတွေကို livewallpaper အဖြစ်သုံးချင်သူတွေအတွက်ပါ
ရေးတဲ့အချိန် 1:12 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
မြန်မာ အဘိဓါန် တစ်ခုပါ အသံထွက်လေးပါပါတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ . sm3အသံထွက်အဘိဓါန်အောက်မှာယူလိုက်ပါနော် သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်မှာ myanmar mpx team အဖွဲ့သားအားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ ဒီမှာယူနော်
မြန်မာ အဘိဓါန် တစ်ခုပါ အသံထွက်လေးပါပါတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ .
sm3အသံထွက်အဘိဓါန်အောက်မှာယူလိုက်ပါနော်
ခရစ်စမက်ပွဲတော်မှာ သူငယ်ချင်း အားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ
ဟီး ဟီး ကျွန်တ်ာကတော့ရေမရှုတတ်ပါဘူး
ရေးတဲ့အချိန် 1:09 AM 1 comment: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ရေးတဲ့အချိန် 1:07 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
[ APK ] Google Translate
> Google Translate App For Android <
Download @ http://www.mediafire.com/?1gxoir8sa3o6tk4
ရေးတဲ့အချိန် 1:04 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဖုန်းတစ်ခါလာရင် Ringtone တစ်မျိုး
မိမိဖုန်းမှာ ဖုန်း ringtone မပြောင်းမချင်း ဒီအသံဘဲလာနေလို့ ရိုးနေသူများအတွက်
ဖုန်ထဲမှာ install လုပ်ပြီးရင်ဖွင့်လိုက်ပါ
အပေါ်က notification Lists နဲ့ Ringtone List ကိုတွေ့ပါမယ်
အဲဒါလေးတွေကိုနှိပ်ပြီး အောက်က Create New List မှာ နာမည်တစ်ခုပေးပြီး cofirm လုပ်ပါ
Add Sound ကိုနှိပ်ပြီး ကြိုက်တဲ့အသံတွေကိုရွေးထားပါ
notification နဲ့ Ringtone Setting ကိုတွေ့ပါမယ်
နှိပ်ပြီး အပေါ်ဆုံးက အကွက်ကလေးနှစ်ခုကို အမှန်ခြစ်ပါ
ဒါဆိုရင်တော့ မိမိရွေးချယ်ထားတဲ့ Ringtone လေးတွေကဖုန်းတစ်ခါလာရင် တစ်မျိုးပြောင်းလဲပြီး မြည်နေမှာပါ
ရေးတဲ့အချိန် 12:58 AM2comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
အကြောင်းအရာ ဆော့ဝဲ ။လုပ်ဆောင်ချက်
လန်းလန်းလေးသုံးချင်သူများအတွက် notification setting လေးတွေ တော်တော်လေးကို စုံပါတယ်..cpu ဘယ်လောက်သုံးနေတယ်..ram ကဘယ်လောက် သုံးနေလည်းဆိုတာ ကြည့်လို့ရတယ်..smart stay အဆင်မပြေသူများအတွက်လည်း screen အမြဲပွင့်နေအောင်လုပ်ပေးတဲ့ setting လည်းပါပါတယ်...pdf file တွေ ဖတ်တဲ့အခါ အရမ်းကို အဆင်ပြေတယ်..icon လေးတွေကို တို့လိုက်ရင် vibrate ခါပေးတယ်..setting ချိန်ပြီးတော့ သုံးပါ..notification bar မှာ software တွေကိုရော တင်ထားလို့ရတယ်..အခြားအသုံးဝင်တာတွေလည်း အများကြီးပါတယ်..စမ်းကြည့်ပါ..phone မှာပါတဲ့ notification setting ထက် အများကြီးသာတယ်..
open software လေးဖြစ်တဲ့အတွက် icon နဲ့ colour ကို စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်..
" ics " မှာသုံးရင် ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေပါတယ်..လိုအပ်မယ်ဆိုရင် " ဒီမှာယူပါ.."
ရေးတဲ့အချိန် 12:55 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
call log ထဲက phone no: ကို ဖျောက်မယ်..
calll log ထဲက ကိုယ်မပေါ်စေချင်တဲ့ phone နံပါတ်ကို ဖျောက်ထားချင်သူများအတွက်...အခုတင်ပေးထားတဲ့ apk ထဲဝင်ပြီး phone no: ကို add လုပ်ပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်..blacklist လုပ်လိုက်တာ မဟုတ်ဘူးနော်..phone အ၀င်အထွက်အကုန်လုံးရပါတယ်..ကိုယ်ကပဲ ခေါ်ခေါ်.ဟိုဘက်ကပဲ ၀င်ဝင် ဖျောက်ပေးထားမှာပါ..လျှို့ဝှက်တတ်တဲ့သူများအတွက် အသုံးဝင်မှာပါ..လိုအပ်လို့ အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင် " ဒီမှာယူပါဗျာ.."
ရေးတဲ့အချိန် 12:47 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Android Software Development Kit(SDK) ကို ကွန်ပျူတာထဲကို install လုပ်နည်း
ကွန်ပျူတာထဲကို install လုပ်နည်း
Android SDK(Software Development Kit) ကို ကွန်ပျူတာထဲကို ထည့်သွင်းဖို့ ပြောပြရတာကတော့ အခြားမဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းတွေကို တကယ့် အသေးစိတ် root လုပ်တာမျိုးတွေ(အခုနောက်ပိုင်းမော်ဒယ်မြင့်ဖုန်းတော်တော်များများက Android SDK နဲ့ computer ထဲမှာ ထည့်သွင်းပြီး root လုပ်ရတဲ့ software ရယ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးroot လုပ်မှရပါတယ် ။ အရင် ဖုန်းတွေလို ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ပြီး root လုပ်ရတဲ့ application မျိုး -ဥပမာ z4root လိုမျိုးနဲ့မ၇တော့ပါဘူး) ၊Android application တွေကို ကိုယ်တိုင်ရေးသားလိုသူတွေအတွက် Android SDK ဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Android SDK ကိုကွန်ပျူတာထဲကိုinstall စလုပ်လိုက်ကြရအောင်။
Android SDK တစ်ခုလုံးကိုပြီးစီးအောင်သွင်းရာမှာ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ရှိရပါမယ်။ အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ tools တွေကို သူ့ဘာသာသူ download လုပ်သွားမှာပါ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Android SDK မသွင်းခင် Java Development Kit (JDK ) ကို ကွန်ပျူတာထဲအရင်သွင်းထားလိုက်ပါ။
ပြီးရင် Android SDK ကို အောက်မှာရယူလိုက်ပါ။
Android SDK အားရယူရန်
ိdownload လုပ်ထားတဲ့ SDK zip ဖိုင်လေးကို zip ဖြည်ပြီး ရလာတဲ့ android-sdk-windows ဆိုတဲ့ folder လေးကို ကွန်ပျူတာရဲ့ C: အောက်မှာသွားထားပါ။ ပြီးရင် အဲဒီ folder ထဲက SDK Manager ကို run လိုက်ပါ။ SDK Manager လေးပေါ်လာပြီဆိုရင် install လုပ်ရမယ့်
tools တွေကို list နဲ့ပြပါလိမ့်မယ်။ အောက်ကပုံထဲကအတိုင်း check လုပ်ပေးပြီး install လုပ်လိုက်ပါ။
လိုအပ်တဲ့ tools တွေကို auto download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် android-sdk-windows folder ထဲကိုပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။ platform-tools ဆိုတဲ့ folder လေးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီထဲမှာ ADB နဲ့ သူရဲ့ functionalities tools တွေပါပါတယ်။ အခု Android SDK ရဲ့ path လမ်းကြောင်းပေးရပါမယ်။ path လမ်းကြောင်းပေးဖို့အတွက် My Computer ကို right click နှိပ်။ properties ထဲက Advance Tab ကိုဝင်ပါ။ Advance Tab ထဲက Environment variable ကို နှိပ်ပါ ။ System variable ထဲကမှ ClassPath ကိုရွေးပြီး edit ကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီမှာ Path လမ်းကြောင်းထည့်ဖို့အတွက် Dialog Box လေးတစ်ခုပေါ်လာပါမယ်။ အောက်ကပုံအတိုင်းပါ ။
အဲဒီ Dialog Box ထဲက စာသားတွေကိုမဖျက်ဘဲနဲ့ အဲဒီစာကြောင်းရဲ့နောက်ကနေ အောက်ပါ directory ကိုထည့်ပါ။
;c:android-sdk-windowstools;c:android-sdk-windowsplatform-tools ထည့်ပြီးပြီဆိုရင် အရင်ရှိပြီးသား path နဲ့ အခု နောက်ကနေထပ်ထည့်လိုက်တဲ့ path လမ်းကြောင်း ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။ ဥပမာအားဖြင့်
C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows Live;C:Program Files (x86)Common FilesMicrosoft SharedWindows Live;%SystemRoot%system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%System32Wbem;%SYSTEMROOT%System32WindowsPowerShellv1.0;C:Program Files (x86)ATI TechnologiesATI.ACECore-Static;C:Program Files (x86)Windows LiveShared;C:Program FilesJavajdk1.6.0_23bin;C:Program Files (x86)Javajdk1.6.0_23bin;C:android-sdk-windowstools;C:android-sdk-windowsplatform-tools
အဲဒီလိုပုံစံမျိုးပါ။ ပြီးရင် SDK နဲ့ ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ရာ လိုအပ်တဲ့ USB Driver တွေကို download လုပ်ရပါမယ်။ SDK Manager ကိုပြန်ဖွင့်ပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်း Available packages ကိုသွားပြီး Google USB driver package ကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီး install လုပ်ပါ။
ဒါဆိုရင် Android SDK ကို install လုပ်ဆောင်မှုပြီးစီးပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့မချိတ်ခင်မှာ ဖုန်းရဲ့ setting ထဲက Application > Development > USB debugging ကို enabled လုပ်ထားရပါမယ်။ တကယ်လို့ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့usb ကတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ပြီးပြီဆို၇င် ခုနက install လုပ်ထားတဲ့
USB Driver က သိပြီး My Computer ကနေ right click နှိပ်ပြီးDevice Manager ကနေကြည့်ရင် အောက်ပါအတိုင်းပေါ်လာမှာပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ကြည့်ပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 3:23 PM2comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
အကြောင်းအရာ ကွန်ပြူတာနဲ့ ဆက်သွယ်ရာ
Android 2.3.7 သို့ Upgrade လုပ်နည်း
Android 2.3.7 firmware ကိုအောက်ပါလင်မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
Download>>> Android 2.3.7 Firmware
Download>>> ROM Manager
RomManager.zip ကို unzip လုပ်ပြီး SD ကတ်ထဲထည့်ပါ။
r141806.zip အား unzip လုပ်စရာမလိုဘဲ SD ကတ်ထဲထည့်ပါ။
RomManager ကို install လုပ်ပြီး open လုပ်ပါ။
မိမိဖုန်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ClockworkMod Recovery ကို install လုပ်ရပါမယ်။
Flash ClockworkMod Recovery ကို ရွေးပါ။
ဖုန်း model တောင်းရင် မိမိဖုန်းရဲ့ model ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ C8600 ဆိုရင်တော့ Huawei Accend 2
အချိန်အနည်းငယ်စောင့်ပါ။ ClockworkMod Recovery ကို download ဆွဲနေတာပါ။
ပြီးလျှင် OK နှိပ်ပါ။
ပြန်တက်လာလျှင် RomManager ကို မီနူးမှ ပြန်ဖွင့်ပါ။
ဒီတစ်ခါ Backup Current ROM ကိုရွေးပါ။
ဒီတစ်ခါ Install ROM from SD Card ကိုရွေးပါ။
ခဏနေရင် reboot ဖြစ်ပြီး 2.3.7 ဖြစ်သွားပါပြီ။
ရေးတဲ့အချိန် 3:10 PM4comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
အကြောင်းအရာ Upgrade လုပ်နည်း
Huawei G300 U8815 Firmware
U8815 V100R001C02B882 (England Vodafone)(05010XJM)
U8815 V100R001C66B886 (Serb Vip mobile(05010YEE)
ရေးတဲ့အချိန် 2:48 PM 1 comment: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
အကြောင်းအရာ Huawei Firmware
Ringtone ကို Hack မယ် !!!
SD card ထဲမှာ ရှိတဲ့ music ကို ringtone ပေးထားတဲ့အခါ Huawei android phone တွေမှာ SD card ကို ဖြုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် UnMount လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်
Default phone ringtone သို့ ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ Phone ရဲ့ Original Ringtone တွေထဲကပေးထားရင်တော့အဲဒီလိုမဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Original Ringtone တွေကသိပ်မလန်းပါဘူး။
ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့coustom ringtone ကို Original Phone Ringtone ထဲဘယ်လိုထည့်မလဲ ?
ပထမဆုံး ကိုယ့် phone က root permission(root) လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
ဒုတိယ root explorer apk ကို Phone မှာ install လုပ်ထားရပါမယ်။
file format changeတဲ့ format factory လို software မျိုးလိုပါတယ်။
Original Ringtone ထဲထည့်ချင်သည့်သီချင်းကို format factory ဖြင့် .ogg သို့change(Use Computer) ပြီး SD card ထဲကူးပါ။
ပြီးလျှင် root explorer ကို ဖွင့်ပါ။ system/media/audio/ringtones သို့ အဆင့်ဆင့် သွားပြီး ogg format ပြောင်းထားသည့် music file ကို
copy ကူးထည့်ပါ။ root explorer ရဲ့ အပေါ်ညာဘက်ထောင့်မှာ Mount R/W ဖြစ်နေလျှင် R/O သို့change ပြီးမှကူးပါ။
phone ရဲ့Original Ringtone တွေထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့coustom ringtone ကိုတွေ့ ရလိမ့်မည်။
မှတ်ချက်။ ။ ogg format သာ support လုပ်ပါသည်။
ရေးတဲ့အချိန် 1:47 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဖုန်း Origin ပါတဲ့ softwares တွေကို ဖျက်လို့ ရတဲ့ tool လေးပါ
ဖုန်း Origin ပါတဲ့ softwares တွေကို ဖျက်လို့ ရတဲ့ tool လေးပါ။ ဘာပြဿနာမှ မရှိဘဲ ဖျက်လို့ ရနိုင်ပါတယ်
apk file လေးပါ၊ Install အရင်လုပ်ပါ၊ ဒီ application ကို run လိုက်ရင် ကိုယ်ဖြုတ်တာကိုရွေး ဖြုတ်ရပါပြီ။ ကျနော် စမ်းပြီး သုံးပြီးပါပြီ၊ အဆင်ပြေပါတယ်၊ တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ Huawei ဖုန်းတွေကိုဘဲ စမ်းထားတာပါ၊ ပြဿနာမတွေ့ရပါဘူး။
ရေးတဲ့အချိန် 1:36 AM5comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
အသုံးဝင်မယ့် audio concert........
နားကြပ်လေးတပ်ပြီး သီချင်းနားထောင်နေတုန်း phone ၀င်လာရင် ringtone အသံကျယ်လွန်းလို့ ညီအစ်ကိုတို့ နားအူဖူးကြမှာပါ..အဲဒီဒုက္ခလေးကို audio concert လေးက ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်..
နားကြပ်တပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ring tone နဲ့ တစ်ခြား volume level တွေကို ကိုယ်လိုသလောက် လျှော့ထားလို့ရပါတယ်..နားကြပ်ဖြုတ်လိုက်ရင် အရင်ကိုယ်ချိန်ထားတဲ့ volume level အတိုင်းပြန်ရောက်သွားမှာပါ..
ညီအစ်ကိုများ လိုအပ်မယ်ဆိုရင် " ဒီ မှာ ယူ ပါ ...."
ရေးတဲ့အချိန် 1:01 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
android market ကိုဝင်ကြည့်ရအောင်
ပထမဆုံးပြောလိုတာကတော့ ကျနော်ကuser အဆင့်ပါ။
လိုင်းကောင်းရင်တော့ gogle marker ကိုဝင်လို့ရပါတယ်။download ကတော့သိပ်အဆင်မပြေပါ
အရင်ဆုံးဒီဖိုင်လေး ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ။
zip file ကိုဖြည်ပြီး app သုံးခုလုံးကို install လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ဖုန်းက internet ဖွင့်ထားရင် ပိတ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် setting / application / market ကိုသွားပြီး
clear data လုပ်လိုက်ပါ။
1နောက်ပြီး install လုပ်ထားတဲ့ Marker unlocker pro ကို
၀င်ပြီး Enable Unlocker ကို on လိုက်ပါ။
2ပြီးရင် Tun.ko installer ကိုဖွင့်လိုက်ရင် သူ့ဖါသာ tun module ကိုဒေါင်းမှာပါ။
3.DroidVPN ကိုဖွင့်ပါ။ ဖုန်းရဲ့ menu key ကိုနှိပ်ပြီး Create Account ရွေးပြီး account သွားလုပ်လိုက်ပါ။
ခဏနေရင် ကိုယ့်မေး မှာDroid VPN ရဲ့ အကောင့် password ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
DroidVPN မှာ user nameaနေရာမှာemail ထည့်, password ထည့်ပြီးStart ကိုနှိပ်ပါ။
အကောင့်ကို Upgrade လုပ်မလားမေးလာရင်ရပါပြီ။ upgrade later ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
android market ကိုဝင်လို့ရသွားပါပြီ။
ရေးတဲ့အချိန် 12:45 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Pinch To Zoom feature ပါတဲ့ Gmail အသစ်
ရေးတဲ့အချိန် 12:29 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
2013 မြန်မာ ပြက္ခဒိန်လေးပါ
ရေးတဲ့အချိန် 12:22 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Multi picture live wallpaper....
ကောင်မလေးကိုပြောတာ.. android user များအတွက် wallpaper မှာ ဓတ်ပုံကို crop လုပ်စရာမလိုပဲ..တစ်ပုံလုံး အပြည့်တင်လို့ရတဲ့ live wallpaper update software လေးပါ..wallpaper plus ထက်သုံးလို့ကောင်းပါတယ်...ပုံကို screen (fit to fullscreen) တစ်ခုလုံး အပြည့်တင်လို့ရသလို..သူ့နဂိုမူရင်း size (show entire picture) အရွယ်အစားအတိုင်းလည်း တင်လို့ရပါတယ်...ပြီးတော့ lock screen မှာလည်း ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်း ပြောင်းတင်လို့ရတယ်.. တစ်ပုံတည်းတင်ရတာ ရိုးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်..ပုံခဏတိုင်းပြောင်းရတာ ပျင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ပုံလေးတွေကို album တစ်ခုလုပ်ပြီး slide show လုပ်ထားလို့ရတယ်..slide show စက္ကန့်ကို လိုသလိုချိန်လို့ရတယ်..slide effect တွေလည်း အတော်စုံပါတယ်..
play stole ကနေတွေ့လို့ဆွဲလာတာပါ..ကျွန်တော်သုံးကြည့်တာ အဆင်ပြေလို့ အားလုံးအတွက် share ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ.. " ဒီမှာယူပါ.."
ရေးတဲ့အချိန် 11:14 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Android phone နှင့် တက်ဘလက်တွေ မှာ ဂိမ်းတွေကို ဒေတာ ဖိုင်ပြန်ဒေါင်းစရာမလိုပဲ တခါတည်းက စားကြရအောင်။
android mobile phoneများတွင် application file များကိုပြန်ဒေါင်းစရာမလိုဘဲ တိုက်ရိုက်သွင်းပီး အသုံးပြုနိုင်သော gpk file များ နှင့် အသုံးပြုနည်းများ
ကဲကဲ အန်းဒရိုက်ဖုန်းမှာ သွင်းဖို. ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို အရင်ဒေါင်းလိုက်ဗျို့ http://www.mediafire.com/?u7bjx5wk73sj4ig ဒေါင်းပြီးဖုန်းထဲ မှာ run လိုက် gpk file game တွေ ဒေါင်းဖို.အတွက် market လေးပါပဲ လိုချင်တဲ့ဂိမ်းကိုဒေါင်းနိုင်ပါတယ် နောက်ဆုံးထွက် ဂိမ်းတွေကအစရှိတယ်
apk နဲ့ gpk နှစ်မျိုးရှိပါတယ် ကျွန်တော်အခုပေးတဲ့ မားကပ်လေးကတော့ gpk လေးပါ သူကိုဒေါင်းလိုက်ရင် data file တွေ ထပ်ဒေါင်းစရာမလိုပါဘူး ။ ကွန်ပြူတာမှာrun ပီး mobile phone နဲ.usb cable ကိုအသုံးပြုပီး gpk ဖိုင်တွေကို ဖုန်းထဲကို install လုပ်ဖို. ဆော့ဝဲလ်လေးတစ်ခုလိုပါသေးတယ် အဲဒါလေးကိုအောက်မှာ ဒေါင်းပါ
အဲဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို ကွန်ပြူတာမှာinstall လုပ်ပြီးရင်
အဲဒီမှာ ကိုယ်ဒေါင်းထားတဲ့ gpk ဖိုင်လေးကို double click လုပ်လိုက်ယုံဖြင့် ဖုန်းထဲကို ဒါရိုက် အင်စတောလုပ်သွားပါလိမ့်မယ်(phone နဲ. ကွန်ပြူတာကိုတော့ usb ကြိုးနဲ. ချိတ်ထားမှ ရမှာပါ)
PC မှာတော့ ဖုန်း driver ရှိရပါမယ်
samsung ဖုန်းတွေအတွက် driver ဒီမှာဒေါင်းပါ http://www.samsungapps.com/mercury/about/onPc.as?COUNTRY_CODE=MYS&_isAppsDep=Y
Huawei ဖုန်းတွေအတွက် driver ဒီမှာဒေါင်းပါ http://www.huaweidevice.com/worldwide/downloadCenter.do?method=toDownloadFile&flay=software&softid=Mzk1MzA%3D
မော်ဒယ်နံပါတ်မမှတ်မိက ဟားဝေးဖုန်းများအားလုံ့းအတွက် တစ်ခုတည်းနှင့်ပီးသောall in one driver ကိုသုံးပါ ဒီလင့်ကိုနှိပ်ပီး ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်က အမျိုးအစား မဟုတ်တဲ့ ဖုန်းတွေ အတွက် ဒရိုင်ဘာတွေကိုတော့ google မှာ ရှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။းဘာလို. ဒရိုင်ဘာသွင်းရသလဲ ဆိုရင် ကွန်ပြူတာက ကိုယ့်ဖုန်းကို သိအောင်လို.ပါ ။ ဖုန်းထဲကို install လုပ်ချိန်မှာ USB debugging ကို on ထားရပါမယ်
gpk သွင်းပုံသွင်းနည်းကို ဒီဆိုဒ်လေးမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ test.zhaoxinpeng.com/viewjy.php?id=295430f116fcc00c7e0050ad
အားလုံးပဲ ဂိမ်းနှင့် application များကိုသွင်းပီး ပြန်ဒေါင်းစရာ မလိုဘဲ ကစားနိုင်ကြပါစေ ခင်ဗျ။
ရေးတဲ့အချိန် 10:56 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
china Android ဖုန်းများအတွက် (M) Root Tool
china ဖုန်းတော်တော်များများအဆင်ပြေပါတယ် kingroot ပေါ်အောင် update လုပ်ပေးရပါတယ် (M) tool မှာပါတဲ့ kingroot တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်
လုလင်ပျိုလည်း တရုပ်စာ နားမလည်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်ဘူးဗျာ
ဘော်ဒါတို့က တရုပ်ကိုင်တယ်ဆိုတော့ တရုပ်စာတတ်လို့ထင်တယ် နော် ခ်ခ်
ကျွန်တော်တော့ တရုပ်စာ နားမလည်လို့ မလိုက်တော့ဘူး ခ်ခ်
ရေးတဲ့အချိန် 10:43 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
အကြောင်းအရာ root ဆော့ဝဲ။လုပ်ဆောင်ချက်
Samsung Galaxy Family Sim unlock tool
Samsung Galaxy Family Smartphone and Tablet (S,S2,S3,Tab,Tab2,Note,Note2 and Variants) တွေကို Sim Unlock tool လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Unlock Sim လုပ်မယ့် ကိုယ့်ရဲ့ Device ကို root လုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ Function တွေကတော့ Sim ကို unlock လုပ်နိုင်မယ် Backup and Restore လုပ်နိုင်မယ် oneclick လုပ်ပေးရုံပါ
အောက်မှာပုံနှင့် တကွ ရှင်းပြထားပါယ်
ရေးတဲ့အချိန် 10:37 PM 1 comment: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဒီဟာထည့်ထားရင် မြန်မာဘာသာအပြင် တခြားဘာသာ ၂၀၀ ကျော် ရေးနိုင်ပြီ
ဒီဟာလေးကတော့ ဖုန်းအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ မြန်မာလက်ကွက်တစ်ခုပါ သို့ သော်
ဖုန်းသေးရင် Frozen လက်ကွက်လောက် မရှင်လင်းဘူး ဖုန်းမျက်နှာပြင် ကျယ်ရင်
ကောင်းတယ် လက်ကွက်စနစ်က ကွန်ပျုတာ မြန်မာလက်ကွက်လိုပါပဲ ဒီဟာက
ဘာကောင်းလည်းဆိုရင် မြန်မာဘာသာ အပြင် တခြား နိုင်ငံစုံက ဘာသာအကုန်
ပြောင်းရေးလို့ ရအောင် ထည့်ထားပေးတယ်။ Frozen သုံးနေတဲ့သူက မြန်မာရယ်
အင်္ဂလိပ်ရယ်ပဲ ရေးလို့ ရမယ် ။ ဒီဟာကတော့ ဘာသာ ၂၀၀ လောက်ပါနေတော့
နိုင်ငံအကုန်လို့ တောင် ပြောလို့ ရတယ် ဒီလိုဆို နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်တဲ့ မြန်မာတွေ
သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအလိုက် ရေးတတ်ချင်ရင် ရေးပြီးပို့ ချင်ရင် ဒီဟာလေးကနေပြီး
ပြောင်းရေးလို့ ရနေတော့ တကယ်အသုံးဝင်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ထွင်တဲ့သူကို
ကျေးဇူးတင်ဖို့မူရင်း ဆိုဒ်ကနေယူလိုက်ပါ ။
ဒီမှာယူလိုက်ပါ ကျွန်တော် ဒါရိုက်ဒေါင်းနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
2. Alternative link
Download from this link if your device doesn't have Android market.
MultiLing Keyboard . Easy . Powerfull . All-in-OneAll-in-one light-weight keyboard
★★ No INTERNET permission = No data/password can be sent out
★ Emoji keyboard: Now supports ios6emoji (Android 4.2 Jelly Bean)
★ Bug fixed for KakaoTalk, WhatsApp, TicToc
★ Extreme customizable/scalable
★ T9, compact, Cyrillic phonetic (swipe ←)
★ Qwerty / Azerty / Qwertz / Dvorak / Left Hand / Right Hand / Colemak / Neo / Bépo
★ εχ๑тὶς, math, smiley faces, Edit Mode, Num Pad, symbols keyboard
★ Unicode IME
★ Esc, Ctrl, Alt, tab keys for ssh, telnet, remote desktop
★ Voice input
★ Auto correction: Type approximately or blind type
★ Autotext / shorthand.
★ User dictionary
★ Word learning
★ Split mode for tablets (thumb typing)
★ ICS (ice cream sandwich) tested.
★ Accents key / dead-key
★ Try Fontomizer SP if you have font issue.
Azərbaycan Azerbaijani, azeri
Basa Jawa Javanese
Basa Sunda Sundanese
Bosanski jezik Bosnian
Diné bizaad Navajo, Navaho
Español, Castellano Spanish; Castilian
Euskara, Euskera Basque
Français, Langue Française French
Gàidhlig Scottish Gaelic; Gaelic
Gjuha Shqipe Albanian
Hrvatski Jezik Croatian
IPA International Phonetic Alphabet
Język Polski Polish
Lakȟóta Sioux, Lakota
Latine, Lingua Latina Latin
Latviešu Valoda Latvian
Lietuvių Kalba Lithuanian
Limba Română, Moldovenească Romanian, Moldavian, Moldovan
Mvskoke Creek, Muskogee, Muscogee
Norsk bokmål Norwegian Bokmål
Ōlelo Hawaiʻi Hawaiian
Schwyzerdütsch Swiss German
Serbsce, Serbski Sorbian, Wendish, Lusatian
Slovenčina, Slovenský jazyk Slovak
Slovenski jezik, Slovenščina Slovene
Türkmen Түркмен Turkmen
кыргыз тили Kirghiz, Kyrgyz
қазақ тілі Kazakh
македонски јазик Macedonian
српски језик Serbian
татар теле Tatar
тоҷикӣ, toğikī, تاجیکی‎ Tajik
Тыва дыл Tuvan
українська мова Ukrainian
ئۇيغۇرچە‎ Uighur, Uyghur
بهاس ملايو‎ Malay
پښتو Pashto Pushto
سنڌي، سندھی‎ Sindhi
فارسی Persian, Farsi
ދިވެހި Dhivehi Maldivian
አማርኛ Amharic Ethiopian
मराठी Marathi (Marāṭhī)
संस्कृतम् Sanskrit (Saṁskṛta)
हिन्दी, हिंदी Hindi
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri
ਪੰਜਾਬੀ Panjabi, Punjabi
မွနျမာဘာသာ Myanmar, Burmese
ខ្មែរ, ខេមរភាសា, ភាសាខ្មែរ Khmer
ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ Cherokee
ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ Ojibwe, Ojibwa
한국어 (韓國語), 조선어 (朝鮮語) Korean
ꆈꌠ꒿ Nuosu, Yi, 彝
粤拼 Cantonese Jyutping
手寫 中日韩 CJK Handwriting recognition
日本語 にほんご Japanese romaji
ရေးတဲ့အချိန် 10:12 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Wechat ဆိုတာလေးကလည်း စွယ်စုံရတယ် ( ချစ်သူရှိရင် ပိုကောင်းတယ်ဗျို့ )
WeChat 4.2 (v4.2) (Android) APK (FREE)
Overview: WeChat Messenger isatop mobile voice and text chat application with friend-discovery social features and shared streaming photo feeds from friends’ personal photo albums!
What’s New in WeChat version 4.2:
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ ဖုန်းထဲမှာသုံးဖို့ ပါ ။ အပြန်အလှန် စာတွေ ၊ ပုံတွေ ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်၊
သီချင်းဖိုင် ၊ အသံမက်ဆေ့ လုပ်ဖို့အသံဖမ်းပြီး အသံဖိုင်လေးပို့ နိုင်ဖို့ အဆင်ပြေပြီး
လွယ်ကူစေတဲ့ ဆော့ဝဲပါ.။တဖက်လူက မအားတဲ့အခါ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ စကားလေး
ပို့ လိုက်လို့ ရတယ် ။ ဗီဒီယိုလည်း ရိုက်ပြီး ပို့ လို့ ရပါတယ် ။ အသံဖိုင်ပို့ တာကလည်း
စကားပြောစက်လိုပဲ ခလုပ်လေးဖိဖိပြီး ပြောရတာ ။ ဝေါ်ကီတော်ကီ လေးလိုပဲနော်
ချက်တဲ့အခါသုံးတဲ့ ပုံလေးတွေက ဘဲလေးတွေ ၀က်ဝံလေးတွေ ကြောင်လေးတွေ
ပန်းလေးတွေဆိုတော့ ချစ်သူ2ဦး ဒီဆော့ဝဲလေးနဲ့အပြန်အလှန် ချက်တင်လုပ်ဖို့ 
မအားတဲ့အခါ သတိရကြောင်း လွမ်းကြောင်း အသံလေးပို့ ထားဖို့များ သီးသန့် 
လုပ်ထားသလား ထင်ရပါတယ် ။ ဆော့ဝဲတော့ ရှိပြီ ခက်တာက ချက်တင်လုပ်ပီး
အသံဖိုင်ပို့ ဖို့ က ရည်းစားမရှိပဲဖြစ်နေတယ် ။..ကဲ....ကဲ.... လိုတဲ့သူ စမ်းသုံးချင်သူ
Google play ကယူ ။ ဖုန်းထဲ တန်းထည့်လို့ ရပါတယ် ။ ဖုန်းမှာ သုံးတဲ့အကောင့်နဲ့ 
ကွန်ပျုတာမှာ သုံးတဲ့အကောင့် တူနေရင် ကတ်မဖြုတ်ပဲ ကွန်ပျုတာနဲ့မချိတ်ပဲ
ချက်ချင်းဝင်ပါတယ် ။ဖုန်းမှာ အင်တာနက်သာ ဖွင့်ထားပြီး နှိပ်လိုက် ။ ဖုန်းထဲကို
၀င်လာပါလိမ့်မယ် ။ မရရင် မေးကတောင်း ဆော့ဝဲတော့ ပို့ လို့ ရတယ် ချစ်သူက
ပို့ လို့ မရဘူး ..ကိုယ့်မှာလည်း မရှိလို့ ပါ နော..း)..............................................။
ဒီလင့်မှာယူပါ - https://play.google.com/wechat video chatting and messager
Google play ကမရရင် ဒီမှာယူ -http://uploaded.net/file/cr5fafo9/w4.2.Android.zip
ရေးတဲ့အချိန် 4:17 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
C8812 Original Firmware (V 4.0.3)
ကဲ Root လုပ်တာ မှားလိုပဲဖြစ်ဖြစ် ၊Software ကျသွားလို ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြန်တင်လိုရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Huawei C8812 Original V4.0.3 Download ဆွဲရန်
Instruction : : Hold VolDown and VolUp + Power button
ရေးတဲ့အချိန် 3:48 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Android ဖုန်းမှာ မွန်ဖောင့်နှင့် ကီးဘုတ် သုံးချင်ရင်
Andriod ဖုန်းမှာ မွန်ဖောင့် သုံးလိုပါက ROOT လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ် ထည့်ပြီရင်လဲ
change font က change နေတဲ့ ပုံစံလေးအတိုင်းပဲ change တတ်မှာပါနော်..။။
မွန်ယူနီ သုံးချင်တယ်ဆို ဒီမှာယူပါ ဒါမှမဟုတ် mon font ပဲသုံးမယ်ဆို ဒီမှာဒေါင်းယူပါ။။။
ရေးတဲ့အချိန် 2:58 PM No comments: ရေးသားသူ ရာဇ၀င်ထဲက အမောင်လုလင်ပျို
DroidSheep for Android (တစ်ခြားတစ်ယောက်ရဲ့facebook ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုပီး အကောင့် user တစ်ယောက်နည်းတူ အသုံးပြုနိုင်)
Android ဖုန်း/Tablet ကိုအသုံးပြုပြီး Wifi ကွန်ရက်တစ်
သူတွေရဲ့ facebook ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုပီး အကောင့် user တစ်ယောက်နည်းတူ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒီမူရင်းအကောင့်ပိုင်ရှင်က
သူ့ကွန်ပျူတာ ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းကနေ facebook ကို logout လုပ်သွားပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဆီမှာလည်းကြည့်ရှုလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ logout မလုပ်သရွှေ့ သူ့အကောင့်ကိုကြိုက်သလိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှု ပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲကို သုံးဖို့အတွက် root ဖောက်ပြီးသားဖုန်းများသာလျှင်
ရေးတဲ့အချိန် 4:14 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Skype V 3.0.0.6181
ရေးတဲ့အချိန် 3:59 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Mp3 Media Converter 1.2
Summary: Media converter allows you to convert your media (videos of flv, 3gp, mp4 and more.
Downloads: 1534 | Updated: 2012-05-08
ရေးတဲ့အချိန် 3:44 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
GSM/WCDMA Internet မိမိသုံးစွဲယူနစ် (bit) အား Computer တွင် မှတ်တမ်းတင်နည်း
မိမိသုံးစွဲယူနစ် (bit) အား Computer တွင် မှတ်တမ်းတင်နည်း
၁။ ယခုလင့်မှ Installer ကို Download ရယူပါ။
၂။ bit meter2Installer ကို Computer တွင် Install လုပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်လျှင် Graid Screen လေး Computer မှာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Grid လေးတွေလှပ်နေတာကတော့ မိမိသုံးစွဲနေတဲ့ Real Time bit/sec နဲ့ အနိမ့်အမြင့် ပြနေမှာပါ။ ပြီးရင် အဲဒီ Transparent Screen လေးပေါ်မှာ Right Click နှိပ်ပြီး Statistics Grid ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ Browser လေးပေါ်က မိမိကြည့်လိုတဲ့ သုံးစွဲပြီး bit/sec ကို ကြည့်လိုက်ပါ။
၃။ ဒီ bit meter လေးက မိမိသုံးစွဲလိုက်တဲ့ Upload bit/sec နဲ့ Download bit/sec ကို အချိန်တိုင်း၊ နေ့ရက်လိုက်၊ နာရီလိုက် မိမိသုံးစွဲလိုက်တဲ့ Bit/sec ကို မှတ်တမ်းတင်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ Facebook တစ်ခုတည်းဖွင့်ကြည့်ရုံနဲ့ 1M/sec download ရှိပြီး ဆက်ကြည့်ရင်ကြည့်သလောက် Mbit/sec နှုန်းဖြင့် ဆက်လက်တက်နေမှာဖြစ်တာ တွေ့ရမှာပါ။
၅။ မိမိ ကြည့်နေကျ Website လေးတွေရဲ့ သုံးစွဲကျသင့်မည့် ငွေကို တွက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Myanmar Mobile Users Group
Thit Htoo Lwin blog တွင်ဖော်ပြသော သတင်းကို မူရင်းအတိုင်းမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အောက်က မျှုားပြထားတာလေးတွေအတိုင်း နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်
ရေးတဲ့အချိန် 2:30 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Deep Sl**p Battery Saver Pro v1.01 for Android (Fu...
Video Caller Id ဖုန်းလာရင် ဗွီဒီယိုလေးနဲ့ပြအောင်လု...
ရတာနာပုံ တယ်လီပို့ က ၀န်ဆောင်မှု ပေးနေပြီ ဖြစ်တဲ့ r...
‘twitter software ကို android ပေါ်မှာ အလွယ်တကူ သုံး...
မြန်မာ အဘိဓါန် တစ်ခုပါ အသံထွက်လေးပါပါတော့အဆင်ပြေတာ...
Android Software Development Kit(SDK) ကို ကွန်ပျူတ...
ဖုန်း Origin ပါတဲ့ softwares တွေကို ဖျက်လို့ ရတဲ့ ...
Android phone နှင့် တက်ဘလက်တွေ မှာ ဂိမ်းတွေကို ဒေတ...
ဒီဟာထည့်ထားရင် မြန်မာဘာသာအပြင် တခြားဘာသာ ၂၀၀ ကျော်...
Wechat ဆိုတာလေးကလည်း စွယ်စုံရတယ် ( ချစ်သူရှိရင် ပိ...
Android ဖုန်းမှာ မွန်ဖောင့်နှင့် ကီးဘုတ် သုံးချင်ရ...
DroidSheep for Android (တစ်ခြားတစ်ယောက်ရဲ့facebook...
GSM/WCDMA Internet မိမိသုံးစွဲယူနစ် (bit) အား Comp...
tinyCam Monitor PRO v4.2.2
i Tag Music tag Editor.apk (For Android)
Contact Hider for Android
Android ဖုန်းနဲ့ English စာလေ့လာမည့်သူများအတွက်
ဒါတွေသိမှ Internet ကို ဖုန်းနဲ့ သုံးပါတော့ဗျာ
How to Install Android OS onaFlash / Memory / Pe...
Pattern Lock မေ့နေသူများအတွက်
Android ဖုန်းတွေအတွက် International snooker ဂိမ်း
z4root v1.4.2 for Android
Android Phone တွေမှာမြန်မာဖောင့်မရှိဘဲမြန်မာလိုmes...
Android စနစ်သုံးဖုန်းများ ဝယ်ယူရာတွင် သတိပြုရန် လိ...
How To Root Your Android(One Click)
Android Phone များမှာအင်တာနက် Speed ကိုမြှင့်သုံြး...
Android Phone များမှာ Built-in Facebook App မပါသူမ...
Samsung S3 ဖုန်းအတွင်း pattern lock ဖြေနည်း
စက်ရုပ်တွေပေါ်မှာ facebook ကို chatting ပဲသုံးလိုသူ...
Sony Ericsson Android များအတွက် Official PC Suit ပ...
Android များအတွက် Driver တွေပါ။
Android phone နဲ့ tablet များအတွက် EDGE နဲ့ 3G int...
Internet Usage Monitor ( Widge)
သင့်ရဲ့ Android Device အသုံးပြုရာမှာ လေးလံလာပြီဆို...
Play Store ကိုအလွယ်ကူဆုံးဝင်ရောက်နည်း
Huawei phone များအတွက် unlock code generator softw...
ဖုန်းထဲမှာသွင်းထားတဲ့app တွေကို .apk(installer ဖို...
application(ဆော့ဝဲ) တွေကို installer ဖိုင် (.apk) ...
ဓါတ်ပုံတွေကိုအမိုက်ဆုံးပြင်ပေးမယ်......UCam Pro v2...
MYMC Radio (Myanmar Youth Media Club) v1.0 for And...
Wild Blood v1.0.9 APK+Data File For Android
Samsaung Galaxy Note2မှာပါဝင်တဲ့…Paper Artist Ap...